बढी व्याज असुल्दा पाँच बैंकले... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
ऋणीबाट लिने व्याज र बचतकर्तालाई (निक्षेपमा) दिने व्याजको फरक दर नै बैंकहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। व्याजदरको यही फरक दरलाई ‘स्प्रेड दर’ भनिन्छ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो दर ४. ५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हेर्नुहोस् कुन बैंकको स्प्रेड दर कति ?
बैंक स्प्रेड दर असार २०७६ स्प्रेड दर असार २०७५
नेपाल बैंक 4.45% 4.99%
बैंक अफ काठमाण्डु 4.40% 4.98%
मेगा 4.73% 4.33%
प्रभु 4.70% 4.72%
एनसिसी 4.70% 4.12%
कृषि विकास 4.68% 5.46%
नेपाल बंगलादेश 4.64% 4.71%
ग्लोबल आइएमई 4.47% 4.63%
हिमालयन 4.47% 4.50%
राष्ट्रिय वाणिज्य 4.46% 4.70%
स्टान्डर्ड चार्टड 4.45% 4.75%
सनराइज 4.44% 4.37%
एसबिआई 4.43% 4.80%
नविल 4.43% 4.63%
जनता 4.42% 3.67%
एनआइसी एसिया 4.41% 4.96%
इन्भेष्टमेन्ट 4.38% 4.24%
लक्ष्मी 4.37% 4.19%
सानिमा 4.35% 4.64%
प्राइम कमर्सियल 4.32% 3.71%
एभरेष्ट 4.29% 4.69%
माछापुच्छ्रे 4.27% 4.57%
एनएमबि 4.26% 4.33%
सेन्चुरी 4.20% 3.96%
सिद्धार्थ 4.07% 4.15%
सिभिल 3.76% 3.38%
कुमारी 3.54% 3.61%
सिटिजन्स 3.15% 3.64%
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २, २०७६, १४:२१:००